Sep 10, 2019/0
ဥပဒေပြုပြီးနောက်စိစစ်ခြင်း(Post-Legislative Scrutiny) သဘောတရားအား လေ့လာခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး Website Seurity, Development, Technical Support and Maintenance လုပ်ငန်း အိပ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Sep 05, 2019/0
(စ)-အဝေးသင်သင်ကြားလိုကြသူများအတွက် အိမ်ထောင်စုစာရင်းတောင်းခံနေမှုအား ပယ်ဖျက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင် အောင်မြင်ကြောင်း အထောက်အထား၊ အမှတ်စာရင်းနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဆ)-မင်းတပ်မြို့တွင် ဝိဇ္ဇာသိပ္ပံ တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ကောလိပ်ကျောင်း (၁)ကျောင်း တည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၆) ရက်မြောက်နေ့(၃.၉.၂၀၁၉) 03/09/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၇) ရက်မြောက်နေ့(၅.၉.၂၀၁၉) 05/09/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့(၁၀.၉.၂၀၁၉) 10/09/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၉) ရက်မြောက်နေ့(၁၁.၉.၂၀၁၉) 11/09/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၂၀) ရက်မြောက်နေ့(၁၃.၉.၂၀၁၉) 13/09/19
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၂၀ ရက်မြောက်နေ့(၁၃ .၉ .၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၉ ရက်မြောက်နေ့(၁၁ .၉ .၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၈) ရက်မြောက်နေ့(၁၀.၉.၂၀၁၉)
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၈ ရက်မြောက်နေ့(၁၀. ၉ .၂၀၁၉)ပထမပိုင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့(၅. ၉ .၂၀၁၉) တတိယပိုင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့(၅. ၉. ၂၀၁၉) ဒုတိယပိုင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ၁၇ ရက်မြောက်နေ့၅ ၉ ၂၀၁၉ ပထမပိုင်း
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၄)ရက်မြောက်နေ့
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (၁၃)ရက်မြောက်နေ့ (၂၂.၈.၂၀၁၉)